तपाई गोसाइँकुण्ड जाँदैहुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् चिकित्सकका सुझाव - Deshko News Deshko News तपाई गोसाइँकुण्ड जाँदैहुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् चिकित्सकका सुझाव - Deshko News
तपाई गोसाइँकुण्ड जाँदैहुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् चिकित्सकका सुझाव
रसुवा, साउन ७
गोसाइँकुण्ड समुद्री सतहदेखि १४ हजार सय फिटको उचाइमा पर्छ । सत्ययुगमा समुद्रमन्थनपछि उत्पन्न हलाहल कालकूट विषले संसार दग्ध गर्न लागेकाले शिवले त्यसलाई सेवन गर्दा डाह भई जिउ शान्त बनाउन पार्वतीको माइत हिमालयतर्फ लागेका शिवले पहिले वेत्रावती र पछि नीलाद्रि पर्वतमा त्रिशूल गाडी पानी पिएका थिए ।
त्यतिले पनि शान्त नभएपछि उनी तीनधारेबाट बगेको पानीबाट निर्मित कुण्डमा शयन गरेका थिए । कुण्डमा अझै पनि शिव लेटिरहेको अवस्थामा देख्न सकिने विश्वास छ ।